SDWO Relief Projects oo Dharkii ciida iyo Raashinkii Fidrida gaadhsiiyey qaar ka mid ah danyarta xaafada Daami ee magaalada Hargeysa | SDWO.COM & SomalilandNews.net
SDWO Relief Projects oo Dharkii ciida iyo Raashinkii Fidrida gaadhsiiyey qaar ka mid ah danyarta xaafada Daami ee magaalada Hargeysa
Published on June 4, 2019 by sdwo · No Comments
Maanta iyo Caruurtii la gaadhiiyey dharka ciidaee. Alxamdululah baaqii bishiu ramadan aanu idiin soo gudbinay waxa na soo gaadhay 1055 dollar oo aanu ku kala fulinay sedex qaybood oo kala ah raashin aanu dhawr reer ugu iibinay bishii Ramadan. Raashinkii ciidal fidrida iyo dharkii ciida oo aanu dhawr caruura u soo iibinay. Ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro intii ka qaybqaadatay. aamiin yaa rabi
Hadii aad rabtid inaad ka qayb qaadatid deeqaha sdwo. Please nagala soo xidhiidh Samafal@sdwo.com
Raashinkii Afurka bishii Ramadaan.